Chii chinobatirwa: mitengo uye maitiro ekuzviverenga muzuva rako zuva nezuva | Ehupfumi Zvemari
Chii chiri kubatwa
Encarni Arcoya | 30/05/2021 12:14 | Yakagadziridzwa ku 30/05/2021 12:18 | General hupfumi
Imwe yemafungiro ayo anonyanya kukanganisa zuva nezuva ndeyekunyima. Izvi zvinozivikanwa sezviyero zvinotorwa nemubhadhari kuti azvipinze semberi pamitero inofanirwa kubhadharwa. Asi, Chii chinonyimwa? Kune akawanda marudzi?
Tevere tinoda kutaura newe nezve iyo pfungwa yekunyima, mhando dziripo uye zvimwe zvakasarudzika zvaunofanira kufunga nezve iyi pfungwa
1 Chii chiri kubatwa
2 Kukosha kwekuregera
3 Maitiro Ekubata Akaverengerwa
4 Vanoshanda riini
5 Mhando dzekuramba
5.2 Kuchengetwa kwehunyanzvi
Kana isu tichivimba neRevenue Agency, inotsanangura kudzora se "Mari dzinobviswa kumubhadhari nemubhadhariri wemimwe mari, seyakagadzwa mumutemo, kuti vapinde muTraffic Administration se" kumberi "kwemutero uyo mubhadhari anofanira kubhadhara."
Kubata kunofanirwa kunzwisiswa sekumisikidzwa kwedare redzimhosva rinotonga rinokwanisa kudzora imwe mari kana mari yemunhu kuti ubhadhare mari yemitero iyo, mune ramangwana (pfupi, yepakati kana yakareba) iwe yaunofanirwa kubhadhara.
Semuenzaniso, fungidzira kuti uri kuzvishandira uye kuti unofanirwa kuendesa invoice kumutengi. Izvi hazvingotakuri chete VAT, asiwo wega wega mutero wemari uchabviswa. Mari iyoyo inobviswa ndiyo inopinda muHurumende semberi pane izvo, mukota, zvichabhadharwa (uye saka kana nguva yacho yasvika, inofanirwa kubvisa iyo mari yakatobhadharwa kare).
Mune mamwe mazwi, Tiri kutaura nezve imwe huwandu hunobvisirwa muhoro, invoice kana, pakupedzisira, maonero ehupfumi ane chinangwa chekubhadhara chikamu chemutero. kuti, munguva yakati, iwe uchafanirwa kubhadhara.
Vanhu vazhinji nevanyanzvi vanoziva kuti vanofanirwa kuita zvekubatira pamabhiri avo uye kuti, nekudaro, ivo havazogashira huwandu hwemari inotarisirwa, asi zvakati wandei. Asi chokwadi ndechekuti zvakakosha kuita zvibatiso nekuda kwezvikonzero zvakati.
Nekuti vanodzivirira kubiridzira kwemitero. Nekubhadhara chikamu chemutero kumberi, Hurumende iri kuona kuti munhu iyeye anoteedzera mutero, zvikasadaro vanogona kunge vari kurasikirwa nemari. Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe wakabhadhara uye iwe unobhadhara zana euros. Asi kare iwe wakabhadhara mazana maviri euros emitero pamberi. Zvakanaka, kana ukasazvipa, iwe ucharasikirwa neaya zana emauro.
Nekuti inonatsiridza kushomeka kweHurumende. Izvo hazvidzivisike kutora izvi mukufunga. Hurumende inogamuchira mari kubva kuvagari vayo uye izvo zvinoita kuti ikwanise kubhadhara kuzadzikisa zvavakavimbisa. Kana iwe waifanira kumirira kuti munhu wese abhadhare iwe hauna mari yekuenderera "uchishanda" izvo zvinokumanikidza kuti utorere kuzvikwereti.
Maitiro Ekubata Akaverengerwa
Kubata kuri nyore kwazvo kuverenga. Paunenge iwe waziva kuti yakawanda sei yaunofanira kubvisa, iwe unongoda chete kuziva kuti chii base, Ndokunge, iyo mari iyo iwe yaunofanirwa kuisa iyo yekunyima.
Semuenzaniso, fungidzira kuti une bhiri remazana euros uye unofanira kubvisa wega mari yemutero. Iyi mari yaunofanirwa kubvisa inotsanangurwa neHurumende uye inowanzo fanika gore rega rega. Mune ino kesi, isu tiri kutaura nezve 100% (pane zvisaririra zvinoenderana nenyaya, asi kazhinji iyi nhamba).
Izvi zvinoreva kuti 15% inofanirwa kubviswa kubva ku100 euros. Mune mamwe mazwi:
15% ye100 euros iri gumi euros. 15 - 100 euros yakaenzana ne 15 euros. Izvo ndizvo zvaungave iwe zvaunonyatso gashira nekuti mamwe ma85 euros ari kubhadhara mutero.
Hazviwanzo kuve zvakakosha kuti ushandise kubvisirwa, pane zviitiko uye zvinosarudzika umo vagari nemakambani vanogona kuvabvisa (kunyangwe gare gare zvinoreva kuti vachabhadhara mutero).
Muzhinji, iwe unofanirwa kunyorera chinobata kana:
Kubhadhara kunoenderana neakadai.
Kubhadhara kwacho kunodarika huwandu kana hwaro pasi pekunyima.
Iye uyo anobhadhara ndeye anonyima mumiriri, ndiko kuti, munhu anozvishandira wega kana kambani inofanirwa kuve inotarisira kupinda mumitero yako. Izvi zvinonyanya kushanda kune nyanzvi dzakanyoresa muchikamu chechipiri nechechitatu cheIAE (Mutero paEconomics Activities).
Iye anowana anofanirwa kubvisirwa (kazhinji, kana iwe uchiisa invoice kambani).
Paunenge uchinyima, pane mhando zhinji dzaunofanirwa kuziva kuti ugone kudzishandisa nemazvo. Uye ndezvekuti zvese zvikamu uye mari iyo inosanganisirwa neyekunyima inosimbiswa nemutemo.
Muzhinji, izvo zvinonyanya kubatwa ndeizvi:
Chero ani ane imba yekurenda anofanira kuita kubatirira ma invoice, chero bedzi munhu akahaya achiita chiitiko chehupfumi. Kana zvikasaita, zvichave zvakakodzera kuti uone kana pasina kunyatso chengetwa kana kana paine chaiwo kesi.
Inoitwa nenyanzvi, ndiyo iyo iyo Zvinoitwa pama invoice avanoburitsa kuti vatorere zvigadzirwa zvavo uye / kana masevhisi. Izvi zvakafanana neiyo yakatsanangurwa kare, mune iyo chikamu cheiyo hwaro hwehuwandu hwese hunobviswa. Nenzira iyi, ivo vanofanirwa kubhadhara Treasure roga roga vachifunga nezve izvo zvavakatobhadhara pane yega invoice.
Kubhadhara. Iwo ekubhadhara ivo pachavo vanotakura chikamu chakavharirwa kubhadhara kuHaimari. Iyi imari inobviswa pamubhadharo kuitira kuti mushandirwi aibhadhare paakaundi yemushandi. Paunenge uchigadzirira mubhadharo, muhoro wakakura unotorwa, kureva kuti, mari yemari inogamuchirwa isati yachengetwa uye kune iyo mari inobhadharwa kuHaimari.
Zvikamu. Kana iwe uine zvikamu, iwe unofanirwa kuziva kuti iwewo unofanirwa kubata pazviri. Inoitwa pane zvese kuchengetedzeka uye zvivakwa.
Nemari, dhipoziti uye yakatarwa kuchengetedzeka kwemari. Kana zvigadzirwa zvakaenzana uye izvo, nemutemo, zvinowirawo mukati mazvo zvinosungirwa kuchengetedza huwandu.
Mutengo Wakawedzerwa. Ichi ndicho chinonyanya kuzivikanwa, kunyanya nechidimbu chayo, VAT. Kazhinji vashandirwi vanoishandisa kana vangopa mutengo wechigadzirwa kana sevhisi (kana ivo vanoisa mitengo neVAT inosanganisirwa). Nekudaro, ivo havagashiri iyo mari yese nekuti chikamu chayo ndechokuiisa muRevenue Agency.
Iye zvino zvaunenge uchiziva zvishoma nezve kubvisirwa, iwe unozogona kunyatsonzwisisa mirau inovatonga uye kana uri kuita ma invoice zvakanaka kana kana vari kukunyima zvakanaka pamubhadharo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chiri kubatwa
Kavha uye kutumira: ndeapi marudzi aripo uye ari akanakisa